မီးအိမ်ကလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » မီးအိမ်ကလေး	10
Posted by Thint Aye Yeik on Mar 11, 2015 in My Dear Diary, Poetry | 10 comments
မနက်ခင်းတွေ ဘယ်လောက်များများ ပွင့်ဝေကြပြီလဲ….
ငှက်အပြာရောင်တစ်အုပ်… ခပ်သုတ်သုတ် ထပျံသွားတယ်…
မီးတောက်ကလေးက သူ…မငြိမ်းခင်ကလေးမှာ… ပြောသွားတယ်…
Kaung Kin Pyar says: အိပ်…အိပ်…
မကြာခင် ပြီးသွားပါစေ လို့ပဲ……
ဦးကြောင်ကြီး says: ကင်းကောင်က သိပ်ဆိုးတာပဲ.. ကြာလိုက်တာလည်း လွန်ရော.. ပီးကို မပီးနိုင်…
Alinsett@Maung Thura says: ကင်ကောင်ရေ
Kaung Kin Pyar says: ခုမှ တွေ့တယ်…
Alinsett@Maung Thura says: ခွိ ခွိ … အဲ့ကြောင်ကို…မီးနဲ့ရှို…. ကြပ်တိုက်… Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ၂၀၁၅ မှာ
ဆုတောင်းလေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့…
ဆုတောင်းတိုင်း ပြည့်ပါရစေလို့… ဆုတောင်းလိုက်မယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အကုန်လုံးက သူ့ဟာနဲ့သူကောင်းကောင်းအိပ်နေကြတာပါပဲ၊
naywoon ni says: မကြာခင်​ ပြီးမတဲ့ လား ကိုယ်​​တော့မထင်​ဖူး
ဆက်​ရန်​ ဇာတ်​လမ်းရှည်​ကြီး ​သေချာတာက​တော့ ဒါ တစ်​ခန်းရပ်​ ပြဇာတ်​ မဟုတ်​ဘူးဆိုတာပဲ ။
Alinsett@Maung Thura says: ကြို ရေးထားပြီးသားးးး စာမျက်နှာတွေလားးး